China Microporous board mpanamboatra sy mpamatsy |Topower
Nahoana isika no Topower?
Brick Refractory fototra
Alumina silica refractory biriky
Brick Refractory manokana
Fitaovana Thermal Insulation
Fitaovana seramika alumina avo
Momba ny Bricks Refractory
Momba ny Insulation Products
LAFANA OXYGEN VE-BASE
LAFO FY BLAST
LAFANA TSY FERROUS
Vidéo vokatra refractory
Vidéo famokarana orinasa
Ny conductivity mafana amin'ny microporous board dia ambany noho ny an'ny rivotra, ary ny fahombiazan'ny insulation mafana dia in-3 ka hatramin'ny in-4 amin'ny fitaovana nentim-paharazana.Izy io dia fitaovana insulation mafana amin'ny hafanana ambony.Satria misy micropores nano-scale marobe izy io, dia manana fiantraikany tsara amin'ny insulation mafana.
Vacuum insulation Panel (VIP board) no tsara indrindra amin'izao fotoana izao ny rojo mangatsiaka insulation fitaovana amin'ny ambany conductivity mafana sy insulation tsara sy ny angovo famonjena vokany.
Miaraka amin'ny vokatry ny insulation mitovy, ny fampiasana ny vacuum insulation tontonana (VIP tontonana) dia mety hahatonga ny vokatra ho kely kokoa, na hahatonga ny incubator toerana malalaka kokoa.Ao amin'ny toerana insulation mitovy, ny fampiasana ny vacuum insulation tontonana (VIP tontonana) dia afaka manao ny incubator miasa Mitaky ela kokoa.
Ao amin'ny insulation rojo mangatsiatsiaka sy ny fampiharana ny famatsiana angovo, ny vacuum insulation birao dia tsy manome ny habaka utilization tahan'ny ny vokatra, fa koa misy miharihary ny hafanana insulation vokany sy ny angovo famonjena tombontsoa ara-toekarena.
Izy io dia fitaovana insulation rojo mangatsiaka avo lenta sy mahomby.
Ny singa fototra amin'ny board microporous dia dioksida silisiôma nano sy karbida silisiôma.Izy io dia karazana akora insulation hafanana vaovao azo taorian'ny andianà fanehoan-kevitra ara-batana sy simika, misy poti-gazy silisiôma miaraka amin'ny savaivony am-polony nanometers, ary ny masoandro sy ny fibre infrarouge.
Ny fahombiazan'ny insulation mafana amin'ny birao microporous dia in-3-4 heny noho ny fitaovana nentim-paharazana, izay afaka mampihena be ny fanjifana angovo ny fitaovana ary mampihena ny hatevin'ny sosona insulation mafana ilaina.
1. Ny hafanana kely, ny fitehirizana hafanana ambany, ary ny fanoherana ny fahatafintohinana mafana.Ny fanoherana ny mari-pana hatramin'ny 1100 ° C
2. Afaka manakana tsara ny taratra infrarouge
3. Ny conductivity mafana dia miovaova kely amin'ny fiakaran'ny mari-pana, ka mahatonga azy io ho fitaovana insulation mafana amin'ny hafanana ambony.
4. Tsy ho potipotika izy io, ary fitaovana tsy mirehitra A1 izy io, miaraka amin'ny fitoniana mafana tsara, fitehirizana hafanana kely, fanoherana ny fahatafintohinana mafana, ary ny fiainana maharitra.
5. Tsy misy poizina sy ara-tontolo iainana, tsy misy fibre mampidi-doza, tsy misy setroka ary tsy misy fofona hafahafa rehefa mafana, tsy mangidihidy rehefa mikasika ny hoditra, ary azo ampiasaina amin'ny fitaovana an-trano.
6. Ny fitaovana fanaovana hazo dia azo ampiasaina amin'ny fanapahana, fandavahana ary fanodinana hafa.
7. Izy io dia fitaovana tsy mirehitra ary azo ampiasaina ho toy ny soson'ny insulation mafana sy tsy misy afo.
8. Tsy misy poizina sy tontolo iainana, tsy misy fibre mampidi-doza, tsy misy setroka ary tsy misy fofona hafahafa rehefa mafana, ary tsy misy mangidihidy rehefa mikasika ny hoditra.
Microporous board dia fitaovana fanamafisam-peo mafana amin'ny hafanana tsara indrindra, ary mety amin'ny fampiharana misy fepetra avo lenta amin'ny insulation mafana sy fitsitsiana angovo, na fotoana izay voafetra ny hatevin'ny fitaovana insulation mafana.
Fitaovana metallurgique vy sy vy (ladle, tundish, torpedo);
Lafaoro seramika (fandoroana rouleur, lafaoro tonelina);
Lafaoro fitaratra (fatana fandoroana, lafaoro fandoroana, fanasan-damba);
Aluminum indostria (lafaoro fandoroana, fihazonana lafaoro, ladle);
Fitaovana simika (fandoroana lafaoro, fantsona hafanana ambony);
vokatra elektrika (boaty mainty, thermometer, heaters fitehirizana mafana);
Varavaran'ny afo (varavaran'ny ascenseur, fizarazarana afo) ary indostria hafa.
Tondro ara-batana sy simika
Properties JC1050 BOD
Famaritana Temp.(℃) 1200
Haavo betsaka (kg/m3) 320-350
Hery fanerena (MPa) 0.35
(w/mk) 70 ℃ 0.019
200 ℃ 0.021
400 ℃ 0.024
600 ℃ 0.031
800 ℃ 0.034
teo aloha: Plate mika phlogolite
Manaraka: Brick Fireclay maivana
Seramika fibre bodofotsy
Taratasy fibre seramika
Plate mika phlogolite
Blanket fibre azo levona
Adiresy:Zone Indostria No.17th, Zichuan, Zibo, Shandong, PRChina